यतिबेला त सरकार विजुली बेचेर ‘पैँसाको थुप्रोमाथि’ हुनुपर्थ्यो
यतिबेला त सरकार विजुली बेचेर ‘पैँसाको थुप्रोमाथि’ हुनुपर्थ्यो तर, विडम्वना फोहोरको थुप्रोमाथि छ
जनतापाटी डेस्क शनिबार, मंसिर ७, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर’ । त्यतिमात्रै होइन, नेपाल सरकारको चरित्रसँग मिल्ने अरु पनि उखान छन् । जस्तै, ‘नमच्चिने पिङ्को सय झट्का’ लगायत । भनौं भने जिस्काए जस्तो, अहिलेका मूली शासक एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त झन्, नेपाली र हिन्दी उखानसँग अलिक बढी नै परिचित छन् । भाँती पुर्‍याएर बयान गर्न पनि सिपालु । तर अचम्म मान्नु पर्ने कुरा, यस्तो विघ्न व्याख्याताको नेतृत्व कसरी लक्ष्य विमुख हुनसक्छ ?
तर, असाध्य प्रतिबद्धता गरेको सरकार यति विघ्न बेसुरा हुनसक्छ भन्ने उदाहरण भने हाम्रै आँखा सामुन्ने आएको छ । र, घामको उज्यालोमा झैँ छर्लङ्ग पारिदिएको छ, भरखरै सकिएको उर्जा सम्मेलनले । यो सम्मेलन खास सरकारले गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले गरे । चुनावताका गरेका बाचा र सरकारमा आएदेखि गरिएका प्रचार हेर्ने हो भने त, उहिल्यै यो सम्मेलन भइसकेर सरकार अहिले विजुली बेचेर पैंसाको थुप्रोमाथि हुनुपर्ने हो । नकचरो भएर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले गरेको सम्मेलनमा अनुहार देखाउनु पर्‍यो ?
अहो ! भन्नलाई त कति सजिलो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, नेपालको पानी जनताको लगानी’ । अनि, समृद्धि के चिज हो, के प्रजातिको नाउँ हो ?, के गर्दा भेटिन्छ समृद्धि ? र त्यसका लागि इलम गर्ने के हो ? यो हेक्का चाँहि राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? ल ठीक छ, उर्जा सम्मेलन भयो । पाँच महत्वपूर्ण सम्झौता भए । नेपालमा उत्पादित विजुली नेपाल–भारत–बंगलादेश एउटै ग्रीडमार्फत खरिदविक्रि हुने भो । त्यति मात्रै होइन, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि एउटा मार्ग प्रसस्त भयो । तर, त्यसका लागि बनाउनु पर्ने संयन्त्र तयार पार्ने कार्य सरकारले गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? कि, भारत र बंगलादेशले गरिदिन्छन् ? यस्ता मत्वपूर्ण सम्मेलनलाई एउटा फोटो खिच्ने मेलाको रुपमा लिइयो भने समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? अनि, सपना मात्रै देख्ने कि त्यसलाई पूरा पनि गर्ने ? यहाँनेर हामीले गाली गर्न खोजेका पटक्कै होइनौँ । विगतमा गरिएका प्रतिवद्धता सम्झाइदिन मात्रै खोजेका मात्रै हौँ । यही आर्थिक वर्षको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यी, यतिधेरै प्रतिवद्धताहरु गरिएका छन् ।
हेरौँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतका कुरा
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युतराष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत थप गरिनेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याइनेछ । आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गरिनेछ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पुर्‍याइनेछ । निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं –वीरगञ्जकोरिडोरहरूमा ४ सय के.भी. क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ ।
अझ यो भन्दा अलिक आगाडि फर्किने हो भने,
अहिले सरकारमा रहेका दुई कम्युनिष्ट घटक तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा उर्जालाई त राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मूल मन्त्र बनाइएको छ । यस्तै ठूला काम गरेर अबको ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । यी कुरा आम नागरिक यतिचाँडै कसरी भुल्न सक्छन् ?
हेरौँ, वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा,
३. विद्युत उर्जा वृद्धिः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि
आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुल्हो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विद्युत उर्जा प्रयोग गरिने छ । आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने छ । अझै पनि विजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारहरुमा २ वर्षभित्र विद्युत उपलब्ध गराइने छ ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित उर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
यसरी चुनावी घोषणापत्रमै भनिएको थियो–यो गरिनेछ, त्यो गरिने छ । अनि, ख्वै त दुई वर्ष, तीन वर्षमा गरिसक्ने कार्यको थालनी भएको ? नागरिकले प्रश्न सोध्लान् कि न सोध्लान् । धेरै ढाटा नजाऔँ, यही बेला केही ठाउँमा उपनिर्वाचन भइरहेको छ । तर, शैली के त, पुरानै । यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ आदि इत्यादी । के घोषणा, भाषण वा कुराले आउने हो समृद्धि ?
काठमाडौंमा दुई दिन चलेको सम्मेलनका क्रममा विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइन तथा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने लगायत विषयमा पाँच वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले बंगलादेश तथा भारतका जलविद्युत क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइन प्रयोग तथा लगानी भित्राउनको लागि सहज वातावरण बनाउन भनी सम्झौता गरेका हुन् ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)बीच साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । एनएचपीसी भारतको केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो । उसले भारत र भुटानमा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । एनएचपीसीले हिमाञ्चल प्रदेशमा १८० मेगावाटको बैरासिलु पावर स्टेशन, ५४० मेगावाटको चमेरा, ३०० मेगावाटको चमेरा दोस्रो र २३१ मेगावाटको चमेरा तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस्तै, इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच पनि समझदारी भएको छ । यसैगरी, एफएमओ र इप्पान बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, इप्पान र आईएफसीबीच महिला सशक्तकरण गर्ने विषमा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सम्झौतासँगै दुई मूलुक विच विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइनको उपयोग, लगानीको वातावरण लगायतको सिर्जना गर्ने बताए । उनले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारसम्बन्धि महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । अब यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार एफएमओ र नेपाल बैंकर्स संघबीच समझदारी पत्र (एमओयु) भयो । यो सम्झौतापछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका भित्र्याउनको लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
सम्मेलनले दिएको सन्देश
इप्पान अध्यक्ष गुरागाईँले जनतापाटीसँग कुरा गर्दै यो सम्मेलन नेपाल–भारत–बंगलादेश एउटै ग्रीड बजाउन केन्द्रीत भएको बताए । र, उनका अनुसार यो सम्मेलन अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कोशे ढुंगा सावित हुने सन्देश गएको छ । जहाँ नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेशका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र नेतृत्वकर्ताहरु सहभागि भए । त्यसकारण पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण ठहरिएको गुरागाईँको भनाई छ ।
तर, उनले यो सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई भने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको सुनाए । त्यो के हो ? जवाफमा उनले भने, ‘त्यो भनेको नेपालमा उत्पादित विजुली कि सरकार आफैले किनबेच गर्नु पर्‍यो । सरकार यदि त्यो चाँहदैन भने हामीलाई जिम्मा दिनु पर्‍यो । हामी विजुली बेचेर सरकारको डालोमा पैंसा हाल्दिन्छम्, अनि सुतिसुति खाओस् । यो भन्दा राम्रो अवसर के हुनसक्छ ? सरकारका लागि ।’ सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने तर, ग्रीडमा गर्नु पर्ने काम नगर्ने । उनले अगाडि भने, ‘भारत र बंगलादेशले ग्रीड ट्रेडका लागि तमाम काम गरिसके । तर, नेपाल सरकार पुरानै डेरामा छ । एमओयुका कुरा गर्छ । सरकारभन्दा बढी दौडधूप त हामी गरिरहेका छौँ । सरकार त केवल हामीले भनिरहेकै कुराहरु रिपिट गरिरहेको छ ।’
गर्नै पर्ने काम
सरकारले ग्रीड ट्रेडका लागि गर्नुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका थुप्रै कामहरु बाँकी छन् । यो सम्मेलन समेत सरकारले गर्नु पर्ने थियो । तर, गरेन । आउने एक दुई वर्षमा १० गुणासम्म विजुली उत्पादन हुन्छ । तर, त्यसलाई विक्रि गर्ने संरचना खोई ?, गुरागाईँले भने, ‘विक्रिको संरचना बनाउनु परेन । विजुलीमा उत्पादन गरिसकेपछि भोलि बजार खोजौँला भनेर हुँदैन । बजार पक्का–पक्की गरेर उत्पादनमा लाग्ने हो ।’ अहिले पनि ईनर्जी बैंकिङ्मार्फत भारतसँग विजुलीको कारोबार भइरहेको छ । खपत भएर बचेको १–२ सय मेगावाट विजुली त अहिले पनि भारतले किनिरहेको छ । गुरागाईँका अनुसार यही वर्ष निजी क्षेत्रबाट ६ देखि ७ सय मेगावाट विजुली थपिन्छ । अनि, सरकारले यो आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विजुली थप्ने भनेर बजेट कार्यक्रममै भनेको छ । तर, बजारका लागि सरकारले केही गरेको छैन ।
गुरागाईँले आलुको उदाहरण दिँदै भने, ‘आलु किसानले नेपाललाई चाहिने भन्दा १० गुणा बढी उत्पादन गरे । भोलि विक्रि भएन भने कसलाई घाटा हुन्छ ? मुलुकलाई । यदि विक्रिको प्रबन्ध मिलाउने हो भने, त्यो १० गुणाबढी फलेको आलुले कसलाई फाइदा हुन्छ ? यसको पनि सोझो उत्तर हो मुलुकलाई । विजुलीको हकमा पनि त्यही हो । यसरी राज्य किन सोच्दैन ? बजार खोज्ने कार्यमा किन लाग्दैन ? अचम्मको कुरा यो छ ?’
उर्जामा यो वर्ष बजेट
सरकारले यो वर्ष बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले यो वर्ष त्यसका लागि आधार बनाउने भनेरै बजेट छुट्याएको हो ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई मात्र १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याइएको छ, सरकारले । जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश–२, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लोकप्रिय कायक्रम पनि बजेटमा छ ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा बजेटबाटै भएको छ । यस्तै बजेटले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान तीव्र बनाउने योजना ल्याइएको छ ।यस अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा पनि बजेटबाट भएको छ ।
बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । निजामति कर्मचारीले लामो समयदेखि आफ्नो सयेर लगानीमा यस्तो आयोजना बनाउन माग गर्दै आएका थिए । तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा बजेटमा भएको छ । ‘दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि बजेटले समेटेको छ ।
हेटौंडा र इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गर्दै नेपालमा पहिलोपटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याउने योजना पनि छ । बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेमा समेटिएको छ ।